16 Volana Aty Aoriana, Mbola Tsy Vita Ny Fitsaràna Ireo Mpitoraka Bilaogy Zone9 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Septambra 2015 3:02 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Deutsch, English, Español, English
Hatramin'ny nisamborana azy ireo voalohany sy ny namonjàna azy ireo tamin'ny 25 Aprily 2014 dia maro ireo fivoarana sy fiovàna natrehan'ireo mpitoraka bilaogin'ny Zone9 ao Etiopia momba ny raharaha mahakasika azy ireo. Amin'izany rehetra izany, in-30 mahery izy ireo no niseho teo anatrehan'ny fitsaràna tao anatin'ny 16 volana ary nahemotra isaky ny mihetsika izany. Saingy miaraka amin'ny famotsorana ireo dimy voafonja, tamin'ny volana Jolay, dia tonga amin'ny sehatra saropady ny raharaha.
Nandrasana hiverina eo anoloan'ny fitsarana indray ireo mpitoraka bilaogy amin'ny Alatsinainy 7 Septambra. Mbola hahemotra indray ve ny fitsarana ? Vakio ity fanaparitahana ny Jolay sy ity tatitry ny Aogositra ity mba hahalalàna bebe kokoa ny momba ilay fitsarana.